"Ngiyawuthanda lomzimba." Owesifazane owazalwa engenazo izitho zomzimba uthi wayengeke ajabule ngempilo yakhe nangokubukeka kwakhe - Tamban RELAY
Accueil » IMPILO YAMI "Ngiyawuthanda lo mzimba." Owesifazane owazalwa engenazo izitho uthe ubengeke ajabule ngempilo yakhe nangokubukeka
"Ngiyawuthanda lo mzimba." Owesifazane owazalwa engenazo izitho uthe ubengeke ajabule ngempilo yakhe nangokubukeka
Akusilo iphutha lamuntu uma umuntu ezalwa enokukhubazeka. Kodwa-ke, lo mhlaba uhlelwe ngendlela yokuthi abantu abakhubazekile bavame ukuzizwa belahlekile noma belimele ngokubukeka kwabo.
Kuthunyelwe nguChasing Chassidy (@chasing_chassidy) on May 20, 2019 ku-11: 23am PDT
Noma kunjalo, abanye abantu bakwazile ukunqoba le nkinga futhi baphila impilo yabo ngokugcwele. UChassidy Young, owazalwa ene-tetra-amelie syndrome, uyisibonelo esisodwa.
Iyini i-tetra-amelie syndrome?
Yaziwa nangokuthi i-autosomal recessive tetra-amelia, lesi simo ukugula okungajwayelekile okubonakaliswa ukungabikho kwayo yonke imilenze.
Kuthunyelwe nguChasing Chassidy (@chasing_chassidy) on Jan 27, 2019 ku-11: 02pm PST
Lesi sifo sofuzo sidalwa ukuguqulwa kwezakhi zofuzo ku-WNT3 gene nezinye izindawo zomzimba nazo ziyathinteka.
Chassidy: ezahlukene azalwe
Uma umuntu efanelwe ukuyizonda impilo yakhe, kwakunguChassidy Young ngoba le ntokazi yazalwa ingenamalungu ayo amane. Kodwa-ke, uthi uphila impilo engcono kakhulu!
Kuthunyelwe nguChasing Chassidy (@chasing_chassidy) on I-Oct 21, i-2018 ku-11: 36pm PDT
"Bengingeke ngazi ukuthi kufanele ngenzeni uma ngivuka ngakusasa, emzimbeni ojwayelekile nginezandla - ngikhululekile ngokweqiniso nangokukhululeka kwami."
Yize kunesimo abhekene naso, uChassidy uthi ukhululekile kakhulu emzimbeni wakhe kodwa le ntokazi esencane yeminyaka ye-32 iyavuma ukuthi ukukhula akuyona neze into emnandi ngoba ubelokhu ehlekwa ngenxa yesimo sakhe.
Kuthunyelwe nguChasing Chassidy (@chasing_chassidy) on I-Oct 2, i-2017 ku-3: 46pm PDT
Uthe ebangeni lesithupha, ubeyingxenye yeqembu lomdanso futhi wabamba iqhaza emqhudelwaneni. Kodwa-ke, noma ngabe uCassidy wayeyazi le nombolo, akavumelekile ukuhamba nabo ngoba kwakucatshangwa ukuthi wayengeke akwazi ukuyenza.
Uyakhumbula ekhala ngalolo suku futhi eqaphela ukuthi wayehlukile.
Kuthunyelwe nguChasing Chassidy (@chasing_chassidy) on Aug 29, 2017 ku-7: 25pm PDT
Ngenhlanhla, ngenxa yomndeni wakhe, lesi sigameko esidabukisayo asizange sikonakalise ukuzithemba kwentombazane encane eyayiyiyo ngaleso sikhathi. Umndeni wakhe awukaze umphathe ngokuqondile futhi umphoqe ukuthi enze inqubo yobuntwana ngendlela efanayo nawo wonke umuntu.
Wayenakekela umsebenzi wasendlini, ephuma noma nini lapho efuna, futhi wenza konke ngokuphelele.
Yize uCassidy ekujabulela ukuzimela, akakwazi ukwenza konke eyedwa. Kulapho kungena udadewabo u-Ashley nomngani wakhe wesikhathi eside uCandace.
Kuthunyelwe nguChasing Chassidy (@chasing_chassidy) on Jul 25, 2019 ku-7: 47pm PDT
UChassidy uyisikhulumi eshukumisayo esisiza abantu abakhubazekile ukuba bazizwe bebodwa.
Ngokukhuluma I-Barcroft TV, wathi:
“Nginomzimba lo; Ngiyawuthanda lomzimba futhi ngiyawemukela lo mzimba - yilokho engiyikho futhi anginendaba nokuthi uwuthanda noma uwuthanda ngoba ungifanele. "
Kuthunyelwe nguChasing Chassidy (@chasing_chassidy) on May 31, 2019 ku-5: 59am PDT
Lapho owesifazane ethandana, wonke umuntu uyakwazisa
Izithombe zikaChassidy ku-Instagram zithola imibono eminingi emihle evela kubasebenzisi be-Intanethi ababonile ubuhle bayo nokuzethemba kwayo.
"Unokumamatheka okuhle futhi muhle."
Kuthunyelwe nguChasing Chassidy (@chasing_chassidy) on Ngo-Apr 5, 2019 ku-11: 23am PDT
"Uyamangaza ngempela, ubukhazikhazi futhi muhle."
Kuthunyelwe nguChasing Chassidy (@chasing_chassidy) on Feb 19, 2019 ku-11: 09am PST
Naphezu kwesimo sakhe, uChassidy uyakwazi ukubaluleka kwakhe, okumenza abe ngumfazi omuhle kakhulu! Ungugqozi kithi sonke!
Ingane ezelwe iyisithulu yezwa umama wayo ethi "Ngiyakuthanda" nge-1ere isikhathi ngemuva kokubekwa kokuzwa
I-Parsley, i-drainer enhle ye-renal
Isivinini esisheshayo se-Vpn yonke inkinga ixazululwe || I-Internet High Free VPN kuZong nguZong Official - VIDEO
Ezokuvakasha emadolobheni: eBamako, ukumephutha ukugibela kangcono - JeuneAfrique.com
I-Football League 1 - L1: Uhlelo nemiphumela yosuku lwe-14th - I-FOTOT 01
UMate Pokora: kungani akhethe
UMeghan Markle kanye nePrince Harry NJALO abavinjelwe umndeni wasebukhosini - "Abakhulume"
I-Cameroon - Izipesheli Zomsebenzi304
ABANTU & LIFESTYLE7,825
I-TECH & ITELECOM2,631